မင်းကွန်း၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် .. ကျုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ် (၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Travel » မင်းကွန်း၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် .. ကျုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ် (၁)
မင်းကွန်း၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် .. ကျုပ်ရဲ့ ခရီးစဉ် (၁)
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Feb 19, 2014 in Travel | 17 comments
ဒီနှစ် (၂၀၁၄) ခုနှစ်ရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်ကနေ ၁၇ ရက်နေ့အထိ ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီခရီးစဉ်ကတော့ မင်းကွန်း၊ မုံရွာ၊ စစ်ကိုင်း၊ မန္တလေးနဲ့ ပြင်ဦးလွင် ပါပဲ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ညမှာ ရန်ကုန်ကနေ စတင် ထွက်ခွာခဲ့ပြီး မင်းကွန်း မြသိန်းတန် စေတီရှေ့ကို မနက် မခင်း တခင်း အချိန်မှာ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘုရားတက်ဖူးတာ ဘာညာနဲ့ မိုးလင်းခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာ ဈေးရောင်းတဲ့ မိန်းမကြီးတစ်ယောက် ပြောတာကတော့ မြသိန်းတန် စေတီက အတွန့်အတွန့်တွေဟာ သီတာ ခုနစ်တန် ကို ကိုယ်စားပြုတာပါတဲ့။
ဒါဆိုရင် သီတာ ခုနစ်တန်ရဲ့ အလယ်က မြင့်မိုရ်တောင် နေရာမှာ ဘုရားတည်ထားတယ် ဆိုတဲ့ သဘောကို သက်ရောက်သွားလေမလားပါပဲ။
မြသိန်းတန် ဘုရားကနေ ဆင်းလာတော့ ရောင်နီတွေ သန်းလို့လာပါပြီ။ အရာရာကို ပြတ်ပြတ်ထင်ထင် မြင်တွေ့ခွင့် ရလို့လာပါသည်။
ဘုရားအ၀င် မုခ်ဦးကနေ လှမ်းမျှော်ကာ ကြည့်လိုက်မိတော့ ခြင်္သေ့ကြီး နှစ်ကောင်ကို တွေ့ရသည်။ အနောက်မှာလည်းပဲ မြစ်ကြီးနဲ့ ရှုချင်စဖွယ်ပါပဲ။
ဒါနဲ့ပဲ အဲ့ဒီနေရာကို လှမ်းလို့ သွားခဲ့ပါသေးသည်။
မြသိန်းတန် ဘုရားတည့်တည့်က ခြင်္သေ့ကြီး နှစ်ကောင်
ခြင်္သေ့ကြီး နှစ်ကောင်ရှေ့က မြစ်တစ်စင်း
ခြင်္သေ့ကြီး ၂ ကောင်အနား လက်ပံပင်ကြီးပေါ်ကနေ မြေပြင်ပေါ် ဆင်းသက်နားလာတဲ့ လက်ပံပွင့်
မြသိန်းတန် ဘုရားကနေ မြစ်နံဘေးနားကို သွား၊ ပြီးတော့ နေအထွက် ကွက်တိ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ မင်းကွန်း ခေါင်းလောင်းကြီးဆီသို့ ခြေလှမ်း လှည့်လို့ လာခဲ့ပါတယ်။
မင်းကွန်း ခေါင်းလောင်းကြီးကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်တွေ့ခွင့် ရလိုက်တော့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဒီလို ဖြစ်မိသွားတယ်။
“ဟာ … နည်းတာကြီး မဟုတ်ဘူး”
မင်းကွန်းခေါင်းလောင်း ထားရှိရာ နေရာ
မင်းကွန်း ခေါင်းလောင်းကြီး မှာ ကြည့်ချင်တာ ကြည့်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ မင်းကွန်း ပုထိုးတော်ကြီး ဆီသို့ ဆက်လက် ချီတက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
မင်းကွန်း ခေါင်းလောင်းနဲ့ ပုထိုးတော် ကြားမှာ မင်းကွန်း ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်တုတော် ထားရှိရာ အဆောင်တော်ကို ဖူးတွေ့ခဲ့ရပါသေးတယ်။
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ ရုပ်တုတော် ထားရှိရာ အဆောင်တော်
ဖေပေါက်တို့ လက်ဆော့ဆော့ နေတဲ့ထဲမှာ ပါတဲ့ ခြင်္သေ့ဖင်ကြီး
ပုထိုးတော်ကြီး ကနေ ပြန်လာတော့ လမ်းမှာ ပုထိုးတော်ကြီး တည်ထားဖို့ ပုံစံငယ် လုပ်ထားတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒါ ဖုန်းနဲ့ပဲ ရိုက်လာတာမို့ ပုံ မတင်တော့ဘူး။
ပုံစံငယ် အရ အခု တွေ့ရတဲ့ ပုထိုးတော်ကြီးဟာ အောက်ခြေ အဆင့်ပဲ တည်ဆောက် ပြီးစီးပါသေးတယ်။
ဒီပုထိုးတော်ကြီးကို ဆက်ပြီး ဆောက်လုပ်ရင် စနေသားတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်ကို စတေးရမယ် လို့ ဆိုလာတာမို့ ဘုရင်က ဆက်မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ပြော .. တာ .. ပဲ …။
တကယ်လို့ ပုထိုးတော်ကြီးကို အပြီးသတ်အထိ ဆောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်ဖို့ ရှိပါတယ်။
ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲဗျာ ……။ ကြုံတုန်းလေး အောက်က ပုံလေးတွေလည်း အားပေးသွားကြပါဦး။
မဟာရာဇာ ခေါင်းလောင်း တီးနေတာ …
ဒါကတော့ စတိုင်မလိုင်နဲ့ပေါ့။ (ဂျစ်ခလေး မမျင်ဘာစေနဲ့)
ခေါင်းလောင်း ကို ရိုက်မလို့လားဟမ်?
နာအဲ့လို သွားခဲ့တုန်း က ဒီလို လေး လိုတိုရှင်း ပြောပြဖို့ အကြံမရဘူးးးး
ဒါနဲ့ နာ့ မောင် ပိုပိုချောလာသလားပဲ။
ခေါင်းလောင်းကို တီးလည်း တီး
ရိုက်လည်း ရိုက်တာပါ …
ပြီးတော့လည်း ၀န်ခံပါသေးတယ် …
ကျော် အရောင်ဟပ် ခံရလို့ပါ ဂျီးဒေါ်ရယ် …
ခေါင်းလောင်းတီးတာနဲ့တော့ မတူတာ အမှန်
မကြားဖူး .. မမြင်ဖူး ရင် မှတ်ထား ..
နာလေ.. အောက်ဆုံးက ပုံကိုကျိပြီး ပါးစပ်က လွှတ်ကနဲထွက်သွားမိတဲ့ ကွန်မန့်..
ဟီး. ရေးမကောင်းလို့ ရေးတော့ပါပု..
မရေးတာ တော်ဒေးဒယ် …
မမြင်ဘူးလို့ ဘောထားလိုက်နော် …
ကိုယ်တိုင်ရောက်ခဲ့ အဲပုံတွေရိုက်ခဲ့ပေမဲ့ ဒီပုံတွေက လှလိုက်တာအေရယ်။ ယူသွားတယ်နော်။ အောက်ဆုံးပုံကတော့ အလှဆုံး
ဂျစ်တူကို တစ်စာဖောက်ပီးတွားရဒဲ့ခရီး အတော်ပျော်ခဲ့လား
အပေါ်က ပုံလေးတွေ ကြည့်လာတာ အဟုတ်သား
အောက်က ပုံကြီးမြင်တော့ လန့်လိုက်တာ
တော်တော် မခန့်တဲ့ ပုံပဲ။
ခရီးသွားပုံဒွေကတော့ ရှယ်ပဲ ..
နာ့အတွက်တော့ ခရီးသွားရတာ ပင်ပန်းဒယ် …
ဒါပေမယ့် ဘေးမှာ ကိုယ်ရှစ်တဲ့သူလေးသာ ပါမယ်ဆိုရင်တော့
ဘာပြောမလဲ… ကမ္ဘာ့အပြင်ဘက်တောင် ထွက်လိုက်ချင်သေးဒယ်…ေိခိ
BTW , ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည် .. နော်
မင်း မန်း လေး ရောက် တာ ငါ့  တောင် မ ခေါ်
မဟာရာဇာ ခေါင်းလောင်း တီးနေ ခြင်းမှန်အတကယ်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့ ထောက်ခံစာယူခဲ့ပါရန်
ခြင်္သေ့ကြီး နှစ်ကောင်ရှေ့က မြစ်တစ်စင်းပုံလေးကို သဘောကျပါတယ်
ကျော် ခေါင်းယားနေတာနဲ့ နောက်ကျောကို ခဏခဏ ကုတ်နေရလို့
မအားဘူး ဖြစ်နေဒယ် …
ဒါဂျောင့် ရီပလိုင်း မပြန်နိုင်ဒါ ခွေးလွှတ်ဂျဘာ ..
နည်းနည်းလေး ဝင်ပြင်ချင်တယ်ဗျာ။ ပုထိုးတော်ကြီးကို ဆက်ဆောက်ရင် စနေသားတယောက် အသက်ကို စတေးရမယ်ဆိုလို့ ဘုရင်က ဆက်မဆောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ “ဘုရားကြီး အပြီးတိုင် မုဆိုးမဏ္ဍိုင် ကျိုးလိမ့်မလွဲ” လို့တဘောင်ပေါ်လို့ ရပ်ပစ်လိုက်တာပါ။ အဲဒီ ပုထိုးတော်ကြီးကို ဘိုးတော်ဘုရား အနှစ် ၂၀ လောက်တည်တာတောင် မပြီးခဲ့ဘူး။ တကယ်လည်း ဆက်မဆောက်တာတောင် မုဆိုးမဏ္ဍိုင် ကျိုးသွားပါတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း အင်္ဂလိပ် မြန်မာစစ်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ ရှုံးလို့ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းကို ပေးလိုက်ရကတည်းက ကျိုးသွားခဲ့တာပါ။
ပုထိုးတော်ကြီး ပြီးရင်တော့ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ သေချာတာပေါ့။ ဘိုးတော်ဘုရားက ငါ့ဘုရားကို တရုတ်ပြည်က လှမ်းကြည့်ရင်တောင် မြင်စေရမယ် ဆိုတဲ့ စိတ်ထားနဲ့ တည်ခဲ့တာလို့ ဆိုတယ်။ ဘိုးတော်ဘုရားရဲ့ အားနည်းချက်က စီမံကိန်းတွေ ကြီးကြီးမားမား စပြီးရင် အပြီးမသတ်တတ်ဘူး။
မြသိန်းတန်စေတီကတော့ မြင်းမိုရ်တောင် နေရာမှာ တည်တယ်ဆိုလည်း အဲဒီလို ယူလို့ရတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စာအရ နတ်ပြည်မှာ ရှိတဲ့ စူဠာမဏိ စေတီတော်ကို ရည်မှန်းပြီး ဆောက်ခဲ့တာကိုး။
ခုလို ကိုစံလှကြီး က ၀င်ပြောပေးလိုက်တော့
ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားတာပေါ့ …
ကျနော်လည်း လိုင်းပေါ်သိပ်မရှိတာနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်
မုံရွာဖက်ထိ ခြေဆန့်လာတဲ့ မဟာဘာဂျာလို ပုတ်ဂိုဂျီးကို မ တွေ့လိုက် ရတာ နာသဗျာ